Kuzoba njani entwasahlobo ka-2017? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uzoba njani u-spring 2017?
Namuhla, Mashi 1, intwasahlobo yesimo sezulu iqala. Isikhathi sombala abaningi abasithanda kakhulu, hhayi abanye kangako. Kuleli kota, isimo sezulu sizoziphatha kanjani? Ngabe izonetha ngaphezu kokujwayelekile? Kungabe kuyashisa noma kuyabanda?
Sizobona izoba njani intwasahlobo ka-2017 ngokusho kweState Meteorological Agency.
Inyanga ngayinye, i-AEMET yenza ukubikezela kwezinyanga ezintathu ezizayo isebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene ezithatha idatha kusuka esikhathini sika-1981-2010 njengesethenjwa. Yize kungenzeki ukwazi ngokuqinisekile ukuthi isimo sezulu sizobe sinjani, singathola umbono ngokubheka lesi sibikezelo. Unalokhu engqondweni, ake sibone ukuthi lesi siteshi sisiphatheleni:
1 Amazinga okushisa
Isithombe - AEMET
Le ntwasahlobo kulindeleke ukuthi ifudumale kunokujwayelekile kulo lonke elaseSpain. Lokhu yinto esivele siyibona ezingxenyeni eziningi zezwe, lapho amanani ahlala phakathi kwama-5 no-7 degrees ngaphezu kokujwayelekile. Ngakho-ke, ngokwesibonelo eningizimu ye-Andalusia, le nhlonhlo, iBalearic Islands kanye neCanary Islands, amazinga okushisa aphezulu angahle abe phakathi kwama-22 nama-24 degrees Celsius. Kokunye, yize bengeke babe phezulu, bazohlala phakathi kuka-15 no-20ºC.
Ngaphandle kokungabaza, zingamanani amahle kakhulu, kepha ajwayelekile kakhulu ekupheleni kwentwasahlobo / ekuqaleni kwehlobo.
Uma sikhuluma ngemvula, kunamathuba amakhulu okuthi aphansi kunokujwayelekile eCanary Islands. Ezweni lonke, maningi amathuba okuthi azohlala ejwayelekile. Lokhu kusho ukuthi uma kungavamisile ukuthi kuna kakhulu endaweni yakho, kulo nyaka ngokuqinisekile ngeke iwe kakhulu.
Ngakho-ke, ngokujwayelekile, kulindelwe inkathi yentwasahlobo eshisayo, kuze kufike ezingeni lokuthi abangaphezu koyedwa nangaphezulu kwababili banesiqiniseko sokugeza echibini noma olwandle ngaphambi kwehlobo, futhi bome.
Yiba nentwasahlobo enhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Uzoba njani u-spring 2017?
Iplanethi yethu ihlala isengozini yokuwa
Kufanele sibhale nini inyanga, ilanga nomhlaba ngamagama amakhulu?